Tinobatsira nyika kukura kubva 1995
Doro Production pamwe Non-kubika & asiri saccharification michina
Complete muti kwakakwana panyaya iyi
Complete chirimwa doro kugadzirwa
Complete muti DDGS
Complete chirimwa emura CO2
Complete muti starch shuga kugadzirwa
Complete muti tsvina mvura kwetsvina
Zononoka kupisa exchanger
Tubhari kupisa exchanger
Jinan Keyu Zhanye Equipment & Technology Co., Ltd ari mukuru & itsva Michina vachida. Zvinonzi yakavambwa vanapurofesa, varairiri, nyanzvi pamusoro Shandong Light Industry University & Shandong chinovira Design Institute uye boka mukuru mainjiniya. Ivo vane ruzivo muminda doro uye CO2. The musangano anopindura 50,000 M2. The kambani iri yakaisvonaka zvitubu guta Jinan, riri enyika, zvoupfumi uye zvetsika muzinda Shandong province.
Kubvira 1995, Keyu Company aita nzendo magadzirirwo, kuvaka uye akapa michina basa distilleries zhinji, panyaya iyi manufactories uye makemikari mafekitari mu China.
Keyu kambani atanga design, midziyo gadzira uye hwokugadzira basa 100,000T / Y wakanaka unhu dzinodyiwa doro chirongwa, 15,000T / Y acetic iine acid chirongwa, 10,000T / Y CO2 chirongwa uye doro tsvina mvura kurapwa chirongwa muPakistan. Hatina kubudirira kuvakwa 60,000 T / Y mafuta panyaya iyi chirongwa uye 30.000 T / Y mapuroteni zvokudya (DDG) Chirongwa Russia. Tinewo kugadzira vavake vakanaka doro uye anoenderana zvirongwa kuti American mutengi. The yokuisvonaka uye basa vakanga zvikuru vakarumbidzwa vatorwa vatengi.
Keyu Company nguva inobva "shumirai vatengi zvechokwadi" kuti ubvume zvinotevera chirongwa vari mumhuri uye mhiri kwemakungwa.
A. ita zvinonyatsorehwa design, kuvakwa kana zvekushandisa kutendeuka basa 3,000-500,000T / Y yakanaka-unhu alcohols (GB10343-2008).
B. ita rokuvaka 1,500-300,000T / Y kwakakwana panyaya iyi (Molecular nomusero mubhedha nzira).
C. Design uye zvinopa zvokushandisa Anonunura & unobereka wakaisvonaka-unhu chikafu CO2 mugiredhi nokuda distilleries / panyaya iyi chirimwa. Mureza GB10621-2006 akanga asvika.
D. Supply rakakwana technology (michina yemhando yepamusoro munyika) uye kuvakwa basa kubereka granuleprotein inosimbisa (DDGS) nokuti distilleries / panyaya iyi chirimwa dzinoshandisa zviyo uye gorosi sezvo zvinhu.
E. Ichapa "razero vinasse zvaikosha" unyanzvi, kuri michina yemhando yepamusoro mu China.
F. Ichapa zvemichina nemidziyo distilleries / panyaya iyi chirimwa kubata vinasses emura kwazvo, dzinoita vakapedzwa wastewater kundosangana "Integrated Wastewater zvinoerera Standard" (GB18918-2002).
G. Design uye gadzira midziyo mvura okuponesa mapurojekiti, uye kuderera mvura manwiro 20m3 hwokubereka rimwe tani doro.
H. kugadzira rinokosha zvokushandisa chiedza bhizimisi uye mushonga indasitiri
boka redu kwete chete anopa mukuru-itsva rwokugadzira uye yepamusoro midziyo asiwo kupa kwazvo mushure-okutengesa basa. Technical nokudzidziswa uye rose-upenyu hwokugadzira basa zvichagoverwa pashure pokupedza basa racho pamwe.
Basa redu kuvaka mutengi kugutsikana wedu pamusoro chepamusoro zvigadzirwa, pamusoro chepamusoro zvokushandisa, pamusoro chepamusoro chikwereti amire uye pamusoro chepamusoro basa.
Jinan Keyu Zhanye Equipment & Technology Co., Ltd ari mukuru & itsva Michina enterprise.It iri yakavambwa vanapurofesa, varairiri, nyanzvi pamusoro Shandong Light Industry University & Shandong chinovira Design Institute uye boka mukuru mainjiniya.